Mogadishu Journal » 2019 » March » 15
Baaritaanka Sanduuqa Madow ee diyaaradii ku burburtay Ethiopia oo ka bilowday Faransiiska
Mjournal :-Khubaro Faransiis ah ayaa bilowday inay baaraan Sanduuqa Madow ee diyaaradii ku burburtay dalka Ethiopia toddobaadkan kadib markii la geeyay magaalada Paris. Diyaarada Ethiopian Airline ee Boeing 737 ayaa burburtay waxyar kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha...
Mjournal :-Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka tacsiyadeeyey dadkii muslimiinta ah ee ku dhintay weerarkii ka dhacay masaajidyo kuyaal dalka Newzealand, guud ahaan gaar ahaan dadkii Soomaaliyeed ee ku...
Mjournal :-Waxaa soo baxaya faah faahin dheeraad ah oo ku saabsan ninkii dadka badan oo Muslimiinta ahaa Maanta oo Jimce ah ku laayey Masjidka Alnuur ee dalka New Zealand,kaas oo la sheegay in uu ahaa Cunsuri soo galootiga neceb. Ninkaas ayaa waxaa lagu Magacaabaa brenton...
Mjournal :-Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu wadaa in ay soo gaaraan magaalada Muqdisho ee caasimada soomaaliya. Gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi C/llaahi ayaa sheegay in la filayo in Madaxweynaha dalka Jabuuti...
Mjournal :-Madaxweynaha Dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in uu horay u jiray Mad madow soo kala dhexgalay Dowladda Federaalka iyo Maamulka Jubbaland, hayeeshee tan iyo wixii ka dambeeyey Xafladii Garoowe uu socday wadahadalo lagu xalinaayey. Waxa uu...
Mjournal :-Nin hubeysan ayaa Jimcaha Maanta ah waxa uu weerar ku qaaday Masjid ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand, isaga oo weerarkaas dad badan ku dilay kuwo kalena ku dhaawacay. Dhacdadan ayaa la sheegay in ay ka dhacday masaajidka Al Nuur oo ku yaalla...